Arrimaha Bulshada - SHABAKADA HIIRAAN XOG
Category Archives: Arrimaha Bulshada
AKHRISO:- Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay heshiiska Itoobiya iyo dagaalka Tuka-raq
Hiiraan Xog, Jun 20, 2018:- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa caawa wareysi uu siiyay TV-ga dowladda wuxuu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin heshiiskii dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, colaada Tukaraq, shirkii Golaha amniga Qaranka ee Baydhabo iyo arrimo kale. Farmaajo ayaa marka hore ka hadlay wixiii...
Gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo loo diiday garaanka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, Jun 19, 2018:- Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa loo diiday in uu galo garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho. Ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa u diiday in uu garoonka ka dhaafo Guddoomiyaha iyo Wafdigiisa oo dalka dibadiisa u doofi rabay. Waxaa uu sheegay in uu ka baaqday Safar uu socday ka dib markii loo...
DAAWO SAWIRO:- Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo la kulmay wafdi ka socda Qaramada Midoobay
Hiiraan Xog, Jun 19, 2018:- Maamulka gobolka Hiiraan heer degmo iyo heer gobol ayaa xarunta maamulka gobolka Hiiraan ku qaabilay wafdi ka socda Qaramada Midoobay. Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin (Sufuroow) ayaa Xafiiska maamulka gobolka Hiiraan ku qaabilay wakiilka Hay’ada (UNNeEEDED) ee Soomaliya mr Jonathon,waxaana kulanka looga hadlay side dowlada...
DAAWO SAWIRO:- Ganacsade reer Hiiraan ah oo dhiisay wadada lamiga ah ee hormarta goobtiisa ganacsi
Hiiraan Xog, Jun 19, 2018:- Ganacsade reer Hiiraan ah oo ku nool magaalaada Beledweyne oo lagu magacaabo Caanoos ayaa ka dhiidhiyay dareenkiisa Wadani niimo,kadib markii uu kaligiis dhisay Wadada laamiga ah ee hormarta goobtisa ganacsii ee ku taalo bartamaha magaalada Beledweyne. Caanoos ayaa ah shaqsi si weeyn looga yaqaano magaalada Beledweyne kuna leh goob ganacsi oo...
Madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi oo gaaray dalka Shiinaha
Hiiraan Xog, Jun 19, 2018:- Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Kim Jong-un ayaa markii saddexaad sannadkan gudahiisa booqanaya dalka Shiinaha. Kim ayaa ka dagay magaalada Beijing booqashadiisa ayaana imanaysa toddobaad ka dib markii uu dalka Singapore kulanka kula la qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Mar sii horraysayna Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed...
DAAWO SAWIRO:- Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo furay shirka magaalada Oslo ee dalka Noway
Hiiraan Xog, Jun 19, 2018:- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, Xog-haya guud ee Qaramada Midoobay, António Guterres iyo Wasiirka Arrimaha dibadda dalka Norway Ine Marie Eriksen Søreide, ayaa si wadajir ah uga furay magaalada Oslo Shirka Madasha Oslo oo looga hadlayo dejinta Xasaradaha caalamka. Ra’iisul Wasaare Xassan Cali Khare oo kulanka khudbad ka...
AKHRISO:- Madaxweyne Waare oo ka hadlay Heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliya
Hiiraan Xog, Jun 19, 2018:- Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu ka hadlay heshiisyadii dowldaha Soomaaliya iyo dalka Itoobiya ay magaalada Muqdisho ku kala saxiixdeen 16-kii bishan, heshisyadaasi waxaa qeyb ka ahaa in la maalgelinayo Afar Dekedood. Wuxuu sheegay Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare in heshiisyadaasi ay yihiin kuwa waxtar badan...
AKHRISO:- Dowlada Soomaaliya oo ka hadashay muranka Bada Kenya iyo Soomaaliya
Hiiraan Xog, Jun 19, 2018:- Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay faah faahin ka bixisay jawaabta gal dacadeedka muranka Badda oo shalay ay u gudbisay Maxkamadda Caalamiga ee Garsoorka (ICJ) ee magaalada Hague. Danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya Amb. Cali Saciif Fiqi oo gacantiisa ku geeyay jawaabta Soomaaliya oo la hadlay Warbaahinta ee magaalada Muqdisho ayaa...
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland oo ka hadlay Heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya
Hiiraan Xog, Jun 19, 2018:- Wasiirka Arrimaha dibadda ee Somaliland, Sacad Cali Shire, ayaa meel adag iska taagay heshiiskii Muqdisho ku dhex maray Sabtidii Soomaaliya iyo Itoobiya. Isagoo u warramayey BBC ayaa wuxuu sheegay in heshiiskaas aysan jirin wax haba yaraatee iyaga ka khuseeya. Mar wax laga weydiiyey arrin ay labada dal ku heshiiyeen oo ah ilaalinta midnimada...
Dowlada Israa’iil oo wasiir hore ku eedaysay in uu u basaasay dalka Iiraan
Hiiraan Xog, Jun 19, 2018:- Israa’iil ayaa wasiir hore ku soo oogtay in uu Iiraan u basaasay, sida ay sheegtay wasaaradda amniga gudaha ee Shin Bet. Gonen Segev oo dhakhtar ah soona noqday wasiirkii tamarta 1990yadii, ayaa lagu eedeeyay in ay Iiraan u qoratay basaasnimo isaga oo Nigeria ku nool. Waxaa la xiray isaga oo booqasho ku tagay dalka Equatorial Guinea bishii...